China4point angular contact ball turntable slewing ring စက်ရုံနှင့် ထုတ်လုပ်သူ |Wanda
4 point angular contact ball turntable slewing လက်စွပ်
Xuzhou slewing bearing ထုတ်ကုန်များတွင်၊ တိကျသော၊ နည်းပညာမြင့်ပြီး တန်ဖိုးမြင့်ထုတ်ကုန်များ၏ အချိုးအစားသည် အတော်လေးနည်းပါးပြီး တန်ဖိုးကြီး slewing bearings များသည် သွင်းကုန်များအပေါ်တွင် မှီခိုနေရဆဲဖြစ်သည်။slewing bearing ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာအရ၊ Xuzhou slewing bearing ကုမ္ပဏီအများစုသည် ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်နှင့် စက်ကိရိယာနည်းပညာများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု နှေးကွေးကြပြီး၊ ဂဏန်းထိန်းချုပ်မှုနှင့် အလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်ခြင်းဆိုင်ရာ စက်ကိရိယာများ၏ ဂဏန်းထိန်းချုပ်မှုမှာ အတော်လေးနည်းပါးပါသည်။အပူကုသမှုလုပ်ငန်းစဉ်နှင့် slewing bearings များ၏အသက်နှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုအတွက်အရေးကြီးသောပစ္စည်းများကိုမြှင့်တင်ရန်လိုအပ်သည်။slewing bearings အတွက် လိုအပ်သော ပစ္စည်းအသစ်များကို သုတေသနပြုခြင်းနှင့် အခြားသော အရန်ပစ္စည်းများနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များကို သုတေသနပြုခြင်းနှင့် တီထွင်ခြင်းသည် slewing bearing ထုတ်ကုန်အဆင့်နှင့် အရည်အသွေးအတွက် လိုအပ်ချက်များနှင့် မကိုက်ညီပါ။ရလဒ်အနေဖြင့် လုပ်ငန်းစဉ်စွမ်းရည်အညွှန်းကိန်း နိမ့်ကျခြင်း၊ ညီညွတ်မှု ညံ့ဖျင်းခြင်း၊ ထုတ်ကုန်၏ ဖြန့်ကျက်မှုအတိုင်းအတာ ကြီးမားခြင်းနှင့် ထုတ်ကုန်များ၏ ပင်ကိုယ်အရည်အသွေး။မတည်ငြိမ်မှုသည် လျှပ်ကူးလက်စွပ်၏ တိကျမှု၊ စွမ်းဆောင်ရည်၊ အသက်နှင့် ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို သက်ရောက်မှုရှိသည်။
ဟိslewing bearingစက်မှုလုပ်ငန်းသည် အရင်းအနှီးကို အရင်းအနှီးပြုပြီး နည်းပညာကို ဦးစားပေးသော စက်မှုလုပ်ငန်းဖြစ်သည်။နှစ်ပေါင်းများစွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပြီးနောက်၊ Xuzhouslewing bearingစက်မှုလုပ်ငန်းသည် ကနဦးတွင် အတော်လေးပြည့်စုံသော စက်မှုလုပ်ငန်းစံနှုန်းများကို ချမှတ်ခဲ့သည်။သုတေသနနှင့်
slewing bearing ကုမ္ပဏီများ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုစွမ်းရည်သည် အလွန်တိုးတက်ခဲ့သော်လည်း ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ၎င်းတို့သည် ဖွံ့ဖြိုးပြီး နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ လုပ်ငန်းစဉ်ဆိုင်ရာ စက်ကိရိယာများနှင့် စမ်းသပ်ကိရိယာများကို တီထွင်ထုတ်လုပ်လျက်ရှိသည်။ရှိပါတယ်
ထိုကဲ့သို့သော ကဏ္ဍများတွင် ကွာဟချက်အချို့ ရှိပါသေးသည်။
တန်ဖိုးကြီးဈေးကွက်တွင် ၎င်း၏ရှယ်ယာကို ချဲ့ထွင်ရန်အတွက်၊ Xuzhou ၏ အရင်းအနှီးနှင့် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ခွန်အားများဖြင့် ခိုင်ခံ့သော Slewing bearing ထုတ်လုပ်သူများသည် R&D တွင် ၎င်းတို့၏ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကို စဉ်ဆက်မပြတ် တိုးမြှင့်လျက်ရှိသည်။ဥပမာ၊ SlewingRing သည် 2011 ခုနှစ်ကတည်းက စက်မှုလုပ်ငန်းစံနှုန်းများကို တီထွင်ခဲ့သည်။ slewing bearing geometry သည် ပိုမိုတိုးတက်ကောင်းမွန်လာစေရန် သေချာစေရန်အတွက် ကော်ပိုရိတ်အတွင်းပိုင်းစံနှုန်းများကို ပိုမိုတင်းကြပ်ထားသည်။မာကျောသောအလွှာ၏အတိမ်အနက်တိုးလာ;ကြိုးကွင်း၏ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းတိုးလာသည်။သံချေးတက်သည့်ပစ္စည်းများ၏ သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အားကောင်းစေသည်။လျှောလက်စွပ်ကို တိုးမြှင့်အသုံးပြုသည်။စက်ပစ္စည်းကိရိယာများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ကွန်ပျူတာ သရုပ်ပြနည်းပညာကို အသုံးပြုမှု ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
slewing ring bearing စွမ်းရည်၏ထိရောက်သောတရားဝင်မှု၊ ထုတ်ကုန်ဖွဲ့စည်းပုံသည် optimization ဒီဇိုင်း၏အရွယ်အစားသို့ဖြစ်သည်။တစ်ချိန်တည်းတွင်၊ Xuzhou ရှိ slewing bearing မှ လုပ်ငန်းအများအပြားသည် slewing ring အခြေခံနည်းပညာနှင့် ဆက်စပ်နည်းပညာများကို သုတေသနပြုခြင်းနှင့် အသုံးချခြင်းတို့ကို အာရုံစိုက်လာကြသည်။
မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း၊ xuzhou slewing bearing သည် လျင်မြန်စွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာပြီး slewing bearings များ၏ အရည်အသွေးသည် မြင့်မားသည်ဟု ဆိုရပါမည်။တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ ကုမ္ပဏီ၏လည်ပတ်နိုင်မှုစွမ်းရည်နှင့် ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းဆောင်ရည်ကို စဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်စေခြင်းနှင့်အတူ Xuzhou slewing bearings သည် ပြည်တွင်းဈေးကွက်တွင် ပြည်တွင်းဈေးကွက်တွင် ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းကို အမြဲထိန်းသိမ်းထားသည်။
အသုံးပြုသူများစွာသည် slewing လက်စွပ်ကို တပ်ဆင်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ လုံလောက်စွာမသိခဲ့ကြဘဲ တပ်ဆင်မှုအမှားအယွင်းများ သို့မဟုတ် မှားယွင်းမှုများကြောင့် မကြာခဏဆိုသလို လှည့်၍မရသောလှည့်ခြင်း၊ ပုံမှန်မဟုတ်သောအသံစသည်တို့ကို ဦးဆောင်ကာ ယနေ့ slewing rings တပ်ဆင်နည်းကို လေ့လာပါ နှင့် slewing bearings ကိုလူတိုင်း slewing rings တပ်ဆင်ရာတွင် ပြဿနာများနှင့် အမှားများကို လျှော့ချနိုင်စေရန်။
ဦးစွာ၊ လျှပ်ကူးလက်စွပ်ကို မတပ်ဆင်မီ၊ ပင်မစက်၏ တပ်ဆင်ခြင်းမျက်နှာပြင်ကို စစ်ဆေးရန် လိုအပ်ပါသည်။အထောက်အကူပြုအဖွဲ့ဝင်သည် လုံလောက်သော ခွန်အားရှိရန် လိုအပ်ပြီး၊ ချိတ်ဆက်ထားသော မျက်နှာပြင်ကို စက်ဖြင့် ပြုပြင်သင့်ပြီး မျက်နှာပြင်သည် အပျက်အစီးများနှင့် ဆူးများ ကင်းစင်နေရပါမည်။လိုအပ်သော ချောမွေ့မှုရရှိရန် စက်မွမ်းမံခြင်းမပြုနိုင်သူများအတွက်၊ တပ်ဆင်မှုလေယာဉ်၏တိကျမှုနှင့်တုန်ခါမှုကိုလျှော့ချရန် မြင့်မားသောထိုးဆေးအစွမ်းပါသော အထူးပလပ်စတစ်များကို အဖြည့်ခံများအဖြစ် အသုံးပြုနိုင်သည်။slewing bearing ၏ slewing ring တွင် ferrule ၏ အဆုံးမျက်နှာတွင် S ဖြင့် အမှတ်အသားပြုထားသည့် မာကျောပျော့ပျောင်းသောဇုန် ရှိသည်။တပ်ဆင်သည့်အခါ၊ လိုက်လျောညီထွေရှိသောတိပ်ကို non-load zone သို့မဟုတ် non-load တွင်ထားသင့်သည်။
ထပ်တလဲလဲဇုန် (ပလပ်ပေါက်အပေါက်သည် ပျော့သောဇုန်တွင် အမြဲတည်ရှိသည်။ )။
ဒုတိယ၊ လျှပ်ကူးလက်စွပ်ကို တပ်ဆင်သည့်အခါ၊ အ radial positioning ကို ဦးစွာလုပ်ဆောင်သင့်သည်၊ တပ်ဆင်ထားသော bolts များကို ဖြတ်ကာ တင်းကျပ်ကာ bearing ၏လည်ပတ်မှုကို စစ်ဆေးရပါမည်။ချောမွေ့သော bearing ဂီယာကိုသေချာစေရန် mounting bolts များတင်းကျပ်ခြင်းမပြုမီဂီယာများကိုစစ်ဆေးသင့်သည်။bolt ကိုတင်းကျပ်သည့်အခါ၊ လုံလောက်သောကြိုတင်တင်းကျပ်မှုဖြစ်သင့်ပြီးအကြိုတင်းကြပ်မှုအင်အားသည် bolt ပစ္စည်း၏အထွက်နှုန်းကန့်သတ်ချက်၏ 70% ဖြစ်သင့်သည်။တပ်ဆင်ထားသော bolts များကို flat washer ဖြင့် တပ်ဆင်သင့်သည်။စပရိန်လျှော်စက်များကို အသုံးပြုရန် တားမြစ်ထားသည်။Slewing bearing တပ်ဆင်ခြင်း ပြီးစီးပြီးနောက်၊ ၎င်းကို လည်ပတ်နိုင်ပါပြီ။နာရီ 100 အဆက်မပြတ်လည်ပတ်ပြီးနောက်၊ တပ်ဆင်ထားသော bolt ၏အကြိုတင်းကြပ်သည့်လိမ်အားသည် လိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီမှုရှိမရှိ အပြည့်အဝစစ်ဆေးရန် လိုအပ်သည်။အထက်ပါစစ်ဆေးမှုကို ဆက်တိုက်လုပ်ဆောင်မှု နာရီ 500 တိုင်း တစ်ကြိမ် ထပ်ခါတလဲလဲ ပြုလုပ်ပါသည်။
တတိယ၊ လျှပ်ကူးလက်စွပ်ကို တပ်ဆင်ပြီးနောက် သင့်လျော်သော အဆီပမာဏဖြင့် ဖြည့်ပေးသင့်ပြီး ဆီများကို ညီညီညာညာ ခွဲဝေနိုင်စေရန် ဘေးထွက် လျှောဝက်ဝံများဖြင့် ဖြည့်ပေးရပါမည်။အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုကြာပြီးနောက်၊ slewing လက်စွပ်bearing သည် အဆီ၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု မလွဲမသွေ ဆုံးရှုံးလိမ့်မည်။ထို့ကြောင့် ပုံမှန်လည်ပတ်မှုတွင် နာရီ 50 မှ 100 လျှင်တစ်ကြိမ် slewing ring bearing ကို ဖြည့်စွက်သင့်သည်။မြင့်မားသောအပူချိန်ပတ်ဝန်းကျင်တွင် သို့မဟုတ် ဖုန်ထူသောနေရာတွင်လည်ပတ်သော Slewing bearings များအတွက်အခြေအနေအရ ချောဆီထည့်သည့်အချိန်သည် သင့်လျော်စွာ တိုတောင်းသင့်သည်။သိုလှောင်ရန်အတွက် စက်ကိုပိတ်သောအခါတွင် ဆီလုံလုံလောက်လောက် ဖြည့်ပေးရမည်။
4. သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း၊ ဝက်ဝံများကို ယာဉ်များပေါ်တွင် အလျားလိုက်ထားရှိသင့်သည်။ချော်လဲခြင်းမှ ကာကွယ်ရန်နှင့် တုန်ခါမှုမဖြစ်စေရန် အစီအမံများ ပြုလုပ်သင့်သည်။လိုအပ်ပါက အရန်ပံ့ပိုးမှုများကို ထည့်ပါ။
5. ဝက်ဝံများကို ခြောက်သွေ့သော၊ လေ၀င်လေထွက်ကောင်းသော၊ ပြန့်ကားသောနေရာတွင် အလျားလိုက်ထားရှိသင့်သည်။သိုလှောင်ခြင်းကို ဓာတုပစ္စည်းများနှင့် အခြားအဆိပ်သင့်စေသောပစ္စည်းများနှင့် ခွဲထုတ်သင့်သည်။ဝက်ဝံ အများအပြားကို အထပ်လိုက် စီထားရန် လိုအပ်ပါက၊ သုံးလုံး သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပို၍ တူညီသည်-အမြင့် သစ်သား spacers များကို set တစ်ခုစီကြား အဝန်းအဝိုင်း လမ်းကြောင်းတွင် တစ်ပုံစံတည်း ထားရှိသင့်ပြီး အပေါ်နှင့် အောက် spacers များကို တူညီသော အနေအထားတွင် ထားရှိသင့်သည်။သံချေးမတက်အောင် ဆက်လက်သိမ်းဆည်းရန် လိုအပ်သော ဝက်ဝံများအချိန်ကာလကို သန့်စင်ပြီး သံချေးမတက်အောင် ထပ်မံပြုလုပ်သင့်သည်။
ယခင်- စက်ရုံထောက်ပံ့မှု အရည်အသွေးမြင့် Triple Row Roller Slewing Bearing
နောက်တစ်ခု: ဘီးတပ်ကရိန်းအတွက် လေးလံသောဝန်နှင့်အတူ ဘီးတပ်ကရိန်းသုံးတန်း၊
External Gear Slewing Bearings များ
ပြင်ပသွားများ Slewing Bearing
flange bearing ၊
4 point angular contact ball turntable slewing...